TRF waxay kobcisaa ilaha | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Nagu saabsan TRF Waxay Kobcisaa Khayraadka
Hay'adda 'Reward Foundation' ayaa ku siinaysa ilaha ugu dambeeyay ee kaa caawinaya inay kugu hagto adiga oo u maraya waxyeelooyinka ka iman kara daawashada filimada internetka. Qaybtaan waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo xiiso leh. Waxaan bilownay inaan horumarino agabkeenna waana ku faraxsanahay inaan awoodno inaan soo bandhigno dib-u-eegista buugaagta, fiidiyowyada ku saabsan sayniska galmada, duubista fekerka maskaxda iyo cilmi baaris cusub. Waxaan sidoo kale bixinaa talo ku saabsan sida loo helo marinka waraaqaha sayniska ee asalka ah.
Inkasta oo bani-aadmigu uu ugu horreyn diirada saarayo dareen, tignoolaji maahan. Waxay ku saleysan tahay macquul macquul ah, oo la dhisay algorithms loogu talagalay inay qabato oo ay haysato fiiro gaar ah. Internetku waa hab toos ah oo wax ku ool ah wuxuuna saameyn ku yeelan karaa qiimaha dhaqanka marka loo eego qoyska. Fahminta saameynteeda waxay muhiim u tahay nadaafadeena, gaar ahaan jiilalkeena soo socda. Si aan uga jawaabno fikraddan, waxaan dhageysanay waxa ay dadku rabaan in ay ka ogaadaan jacaylka, jinsiga, xidhiidhada iyo filimada internetka. Tan iyo bartamihii dhexe ee 2014 shaqadayada dhallinyarada iyo xirfadlayaasha ku jira barashada jinsiga waxay heleen heerar sare oo aan ku qanacsanayn oo ku saabsan tayada, ku habboonaanta iyo waxtarnimada kheyraadka macallinka ee hadda jira. TRF waxay kobcisaa ilaha si loo caawiyo dib-u-dhigga isku-dheelitir la'aanta.
Wakiilo ka socda Hay'adda 'Reward Foundation' ayaa hadda ka hadlay in ka badan labaatan dhacdooyin dadweyne oo ku baahsan Boqortooyada Midowday. Waxaan sidoo kale la hadalnay dhagaystayaal xirfadlayaal ah oo ku kala sugan USA, Jarmalka, Turkey iyo Croatia.
Waxaan kala hadalnay dhammaan noocyada wiilasha iyo gabdhaha ee dugsiyada, iyo sidoo kale iyaga oo la shaqeynaya kooxo yaryar iyo hal shakhsi ahaan. Tani waxay nagu keentay in aan isticmaalno farsamaynta Naqshadeynta Xarunta Aadanaha si loo wadaago khayraadka laga yaabo inay wax ka qabtaan daciifnimada qalabka hadda jira.
Sannadka soo socda Hay'ada Reward waxay rajeyneysaa in ay soo saarto qorshooyin cashar oo loogu talagalay isticmaalka dugsiyada hoose iyo sare.
Waa kuwan qaar ka mid ah ilaha hadda jira…